The Waxqabadka Cimilada ee Minneapolis iyo Cunsuriyada Sinnaanta Lacag waxay soo buuxisay sanadkeedii ugu horreeyay iyada oo abaalmarin la siinayo $65,000 oo deeqo ah saddex urur oo maxalli ah kuwaas oo qabanaya shaqo hal abuur leh si ay wax uga qabtaan isbeddelka cimilada.
Sanduuqa sadaqada sadaqada cusub, iskaashi ka dhexeeyo Magaalada Minneapolis, Minneapolis Foundation, iyo Mu'asasada 'McKnight Foundation', ayaa maanta ku dhawaaqday wareegeedii labaad ee deeqaha. Waxay ka mid yihiin:
$25,000 ilaa Golaha Waddada Lake Street iyo Ururka Ganacsiga Baanka ee Galbeedka loogu talagalay in lagu yareeyo qiiqa gaaska ka baxa iyadoo la abuurayo shuruudaha ganacsatada yar yar ay ku tiirsanaan doonaan baabuurta. Hay'adahani waxay ka caawin doonaan ganacsatada inay si firfircoon ula qabsadaan isbeddelada nidaamka gaadiidka iyo inay hubiyaan in maalgashiga dadweynaha ee xulashooyinka gaadiidka kaarboon-la'aanta ah ay hagaan aqoonta maxalliga ah isla markaana ay u suurtogeliyeen deggeneyaasha iyo booqdeyaasha degmooyinka Lake Lake iyo West Bank ee Minneapolis.
$15,000 ilaa Riyada Caafimaadka Duurjoogta wakiilnimada iyo waxbarashada ku saabsan abuurka asaliga ah. Riyada Caafimaadka Duurjoogta ah waxay abaabushaa Shabakada Sare ee Midnimada Kuwa Dhaladka ah ee Ku-ilaaliyayaasha Suuqa Dhexe, adeeg adeeg xog oo keydiyaya macluumaadka isla markaana wadaaga macluumaad muhiim ah oo ku saabsan abuurka gobolka oo dhan. Shabakada ayaa iskaashi la sameysa qabaa'ilka iyo ururada dadka asalka u ah inay horumariyaan tababaro ku saabsan koritaanka, ilaalinta, xafidaada, iyo wadaagida abuurka asaliga ah. Abuurkaani wuxuu dhiirrigeliyaa adkeysiga isbedelka cimilada iyadoo la taageerayo awoodda bulshooyinka Asalka u leh inay ku koraan oo ay cunaan maxalliga, yareynta ku tiirsanaanta nidaamka cuntada wershadaha iyo yareynta raadkooda kaarboonka. Deeqdani waxay awood u siineysaa Riyada Caafimaadka Duurjoogta inay hagaajiso oo ay ballaariso ururinta abuur, kobciso alaabada qiimaha ku saleysan oo ku saleysan miraha, iyo u isticmaasho abuurka aalad dhaqan ahaan ku saleysan si loogu hawlgeliyo bulshada Asalka ah ee howlaha adkeysiga cimilada.
$25,000 ilaa Wadajiryada Madoowga Madow in la ballaariyo saldhiga hoggaamiyeyaasha Madoow ee Magaalooyinka Mataanaha ah ee u halgamaya sinnaanta cimilada. Hawlaha la maalgeliyey waxaa ka mid ah horumarinta miis hoggaaminta caddaaladda deegaanka oo ay ka kooban yihiin dadka midabka leh iyo hoggaamiyeyaasha asalka ah. Madbacadaha Madow ee Wadajirka ah ujeeddadiisu tahay in lagu kobciyo salka dadka ka soo jeeda bulshooyinka sida tooska ah u saameeya arrimaha cimilada iyo tamarta kuwaas oo horseedi doona ololeyaal istiraatiijiyadeed oo beddelaya xaaladaha iyo siyaasadaha saamaynaya deegaanka.
Guud ahaan, sanduuqa wuxuu helay in kabadan $240,000 codsiyo ka yimid 11 codsadeyaal wareegii deeqdan. Codsiyada waxaa dib u eegay gudi ka kooban xubno ka shaqeeya Minneapolis Foundation, McKnight Foundation, Magaalada Minneapolis, iyo Duqa Magaalada iyo sidoo kale dhowr degane oo ka shaqeeya guddiyada shaqada ee Magaalada Minneapolis.
Mashaariicda la maalgeliyey waa inay sidoo kale hormariyaan Magaalada Magaalada 'Istiraatiijiyadda Sinaan la'aanta Cunsuriyadda ee Magaalada Minneapolis
Qorshe, qorshe afar sano ah oo loogu talagalay in lagu soo rogo mabaadii'da sinnaanta jinsiyada inta lagu jiro shaqada magaalada.
Wareegga xiga ee deeq-lacageedka ayaa la rajaynayaa inuu furmo horaanta 2020. Si aad u hesho ogeysiisyo ku saabsan fursadaha deeqaha, is-qor si aad uga hesho emayl cusub oo ku saabsan Mu'asasadda Minnaasiyada ee Minneapolis www.minneapolisfoundation.org/grants/other-funding.
Ganacsiyada iyo xubnaha bulshada waxay ku tabaruci karaan santuuqa iyagoo qoraal ku diraya cimilada cimilada ilaa 243725, ama tagida www.climatempls.org.